Etymology nke aha obodo Africa - AFRIKHEPRI
27 min gụọ
Map nke Afrika
Syou nwere ebe obodo obodo unu si bia?
South Africa Nkọwa; nke ala ya na mpaghara nke AfrikaAfrica.
Azania (aha ọzọ): ụfọdụ ndị iro nke ọchịchị nkeapartheid jiri aha ahụ Azania kama "South Africa". Ebughi aha nke aha a, mana o zoro aka na otutu mpaghara nke sub-Saharan East Afrika. E nwere ụzọ abụọ dị ka esi malite aha: site na Arabic 'ajam ("Onye mba ọzọ", "ndị na-abụghị Arab"), ma ọ bụ ngwaa Grik azainein ("Ghọta", "kpocha").
Mzansi (aha ọzọ): aha njirimara a na-ewu ewu ọ bụ mgbe a nabataghị ya. uMzantsi pụtara "n'ebe ndịda" na Xhosa.
Angola De Ngola, bụ nke onye eze nke alaeze nke Ndongo. Ndị Portuguese akpọwo mpaghara ahụ maka ịsọpụrụ a Ngola enyere Devid aka.
Benin n'oge gara aga Dahomey, a na-edegharị aha obodo ahụ Republic nke Benin na 1975 dị ka Ọwara nke Benin (nke dị n'ụsọ oké osimiri ndịda). A họọrọ aha a maka nnọpụiche ya, ebe ọ bụ na mba Benin na-aga n'ihu ugbu a, ọ na-eme ka ihe karịrị iri ise dị iche iche dị iche iche dị iche iche dị iche iche na asụsụ dị iche iche. na Benin na Ọwara nke Benin onwe ya bu aha alaeze oge ochie (nke Alaeze Benin) nke mpaghara ahụ, dabere na ya Obodo Benin, taa na Nigeria. Ala eze adịghị ekpuchi mba Benin ugbu a, ọ dịghịkwa njikọ njikọ akụkọ na mba ahụ. Enwere ike inweta aha ahụ Ubininke Yoruba Ile-ibinu, nke pụtara "ala nke esemokwu", na-ezo aka n'oge nke esemokwu n'alaeze ahụ, na-etinye (ma eleghị anya, ọgba aghara) nke ndị Yoruba. Aha ndị a bụ ndị ahịa mbụ Portuguese gbanwere aha a Benin, na okwu yiri ya bini, aha ndị mmadụ (onye na-eji aha ahụ Edo iji zoo onwe ya). Ụfọdụ na-ekwu nke ahụ bini na-enweta site na Arabic بني Bani, "Ụmụ".
Aha Dahomey bụ aha alaeze ochie ahụ fon, a kwupụtakwa na ekwesighi ekwesighi n'ihi na ọ bụ aha otu agbụrụ kasị ukwuu na mba ahụ. Aha ya bu nke dan(agwọ), na-ezo aka na eze nke bi na ya Abomey ; ho pụtara "afọ" na mê "Na".
Botswana A kpọrọ aha ndị agbụrụ kasị ukwuu na mba ahụ, Tswana.
Aha ochie nke mba ahụ, Bechuanaland, sitere na Bechuana, okwu ọzọ nke "Botswana".
Burkina Faso N'ime asụsụ abụọ nke mba ahụ, nke pụtara "mba nke ndị guzo eguzo ọtọ", "obodo nke ndị na-akwụwa aka ọtọ", ma ọ bụ "obodo nke enweghị ire ure". Burkina sitere na ire Ozi, Burkina duDioula.
President Thomas Sankara gbanwere aha mba ahụ na 1984 mgbe ya gbasịrị 1983. Aha mbu, Republic nke Upper Volta, a na-akpọ aha ndị isi nke abụọ Osimiri Volta, ma ha nwere isi mmalite ha na Burkina Faso. Ndị ahịa Portuguese na-akpọ osimiri ahụ; ọ bụ na njedebe nke ndị na-eme nchọpụta tupu na-atụgharị. Volta bụ Portuguese maka "njem" ma ọ bụ "zigzag".
Burundi Site n'asụsụ obodo, nke pụtara "mba nke ndị na-ekwu okwu Kirundi ".
Cameroon Site na Portuguese Rio de Camarões ("Osimiri Osimiri"), aha ndị na-enyocha Portuguese nyere osimiri ahụ Wouri na xve na narị afọ.
Republic nke Congo Aha ya mgbe ala eze ahụ gasịrị Kongo, nke sitere na aha ndi mmadu Bakongo.
République démocratique du Congo Aha ya mgbe ala eze ahụ gasịrị Kongo, nke sitere na aha ndi mmadu Bakongo. Zaire, aha ochie ya, sitere na Portuguese Zaire, mmeghari nke okwu kongo nzere ou nzadi, "Osimiri nke kpochapuru osimiri nile"
Ivory Coast Ntughari aka ahia nkeọdụ na mpaghara. A na-akpọkwa akụkụ ndị ọzọ nke ụsọ oké osimiri Africa: "Coast of Cereals", "Gold Coast", na "Oké Osimiri Slave".
Djibouti asụsụ Afar 'buuti' pụtara ite, a akụkọ mgbe na a na-acha ọcha agha (ọbịa) niile rutere nnọọ ịjụ a nwaanyị aha nke mba na-enye ya n'ala, nke na ọ na-aghọta na ọ na-ele anya na ala hụrụ ya ite na azịza "ii buuti" nke bụ m ite na aha ga-aghọ Djibouti.
na Somali aha mejupụtara abụọ okwu 'jab' nke pụtara ọkara ma ọ bụ ọrịa strok, ma ọ bụ mpaghara nakwa 'buuti' nke pụtara aha e nyere ndị inyom ka cannibalistic amoosu 'nwunye region ojoo' 'jab buuti' ebe Djibouti .
Egypt Du Latin Aegyptus, n'aka nke ya Grik oge ochie (ama ama ama Mycenaean) Ọchịchị (Aigyptos). dị ka Strabo aha Grik na - erite site na Αἰγίντως (Familyí hyptíōs): "Ala di n'okpuru Oké Osimiri Aegean ". Ọ pụkwara inweta aha aha Ijipt Memphis, * ozi gị, nke pụtara "ụlọ (ma ọ bụ ụlọ nsọ) nke Ptah ".
Miṣr Aha (aha Arabakpọ Maṣr en Arabic Arabic): okwu Juu ebe nile ( hébreu : Mitzraim), nke mbụ na-ezo aka n'Ijipt Akkadian, nke pụtara "obodo" ma ọ bụ "dozie, chọta" na Arabic. Aha Turkish et Malay, Egypt et Mesir dị iche iche, na-enweta site na aha Arabic. Aha Hibru bu ihe dika okpukpu abua, nke putara "ndi Ijipt abua", ha nwere ike ime ka ala eze nke Upper Egypt et Lower Egypt. Okwu Hibru pụkwara ịpụta "nsogbu" ma ọ bụ "ebe dị warara", na-ezo aka n'ụdị mba ahụ, nke na-esote usoro nke Nil. Ibu arọ ya dị mkpa karịa Bible, n'oge akụkọ nke Exodus.
Keme Ⲭituna ⲓ (aha Coptic): "Ala ala" (site na onye Ijipt oge ochie kmt), na-ekwu banyere apịtị nke Naịl mgbe mmiri idei mmiri gasịrị, na-eche ihu n'ọzara, a na-akpọ "ala uhie" (Ijipt oge ochie DSRT).
Ethiopia Site n'okwu Grik a na -Aithiopía ; Latin: Aethiopia), site na Αἰθίοψ (Aithíops), "Etiopia", mgbe ụfọdụ ndị na-eme nchọpụta kwusiri ike dịka okwu Grik pụtara "ọkụ ihu (ὤψ)" (αἰθ). Otú ọ dị, ụfọdụ isi na Etiopia (dịka ọmụmaatụ, Akwụkwọ Aksum XVIe ma ọ bụ xviie ọtụtụ narị afọ) na-ekwu na aha ahụ sitere na "Ityopp'is", nwa nke Koush, nwa Chamonye, ​​dị ka akụkọ, guzobere obodo nkeAxum. Enwere otutu echiche banyere ufodu ndi nyocha na okwu Grik bu ‗ἰa 'na - enweta site na okwu nke obodo oge gara aga nke ga - aputa "ihe uto" ma obu "ihe di nma," nke ndi Grik meghariri.
Abyssinia (aha obodo oge ochie na-akọwa ala ndị dị elu nke Etiopia ma na-ewere ya dị ka aha ọzọ nke steeti, nke ọ na-esiteghị na ya): sitere na ụdị Arabic (الحبشة) nke okwu Ge'ez (Ndị ọzọ) (na ndị ọzọ Asụsụ ethiosemitic) habesha, aha a na-ezo aka na ndị bi na ugwu ugwu ndị na-arụ ọrụ nke obodo ahụ kemgbe oge ochie.
Gabon De Gabao, aha Portuguese maka ikpere Osimiri Kom (na French: Eston nke Gabon). Osimiri ahụ na-ewepụta aha ya site na ọdịdị ya, nke yiri nke uwe elu (Gabao).Gabao sitere na Arabic قباء (Qaba ').
Gambia Du Osimiri Gambia na-asọba na mba ahụ. Okwu Gambia enwere ike inweta site n'okwu Portuguese Cambio ("Exchange", "ahịa"), na-ezo aka ahia nke ndị Portuguese mere n'ebe ahụ.
Ghana Site na aha alaeze nke West Africa. Otú ọ dị, ókèala oge a nke Ghana abanyebeghị na nke a. JB Danquah kwuru aha ahụ obere oge tupu nnwere onwe nke mba ahụ. Nchoputa ya mere ka o kwenye na ndi Ghana bu ndi ala eze oge ochie; ndị ọzọ ekwenyeghị na nkwubi okwu ya. OkwuGhana pụtara "dike agha" ma bụrụ aha e nyere ndị eze nkeAlaeze nke Ghana22.
Côte-de-Gold (aha ochie colonial): dịka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke gold dị na mba ahụ site n'aka ndị Europe. A kpọkwara akụkụ ndị ọzọ nke ụsọ oké osimiri Africa ka ha jiri ngwá ahịa ha kachasị mkpa: " Ivory Coast "Ụsọ Oké Osimiri", "Coast of Cereals".
Guinea Site na asụsụ sousou, nke pụtara "ndị inyom". Ndị Europe mbụ batara n'ógbè ahụ ga-anụworị nkwenye, asụsụ bụ isi nke ndị bi n'ụsọ oké osimiri Guinea. Ọ na-enweta site na Portuguese Guine, nke e chere na ọ ga - enweta site n'Africa, ma ọ bụ site na ya Berber Akal n-Iguinawen ou aguinaoui, "Ala nke oku".
Aha colonial ya bụ French Guinea.
Guinea-Bissau Mpaghara a na-akpọ Guinea nwere isi obodo nke Bissau.
Aha colonial ya bụ Portuguese Guinea.
Equatorial Guinea "Equatorial", si ụwa. Onye na-ejikọta ya adịghị agafe n'ókèala mba ahụ, ma mba ahụ na-eme ka onye na-ekwu okwu site na ya si n'àgwàetiti yaAnnobon bụ n'ebe ndịda, ebe ugwu bụ ugwu ugwu nke akara a. "Guinea" nwere ike si na okwu ahụ Berber aguinaoui, nke pụtara "nwa".
Aha colonial ya bụ Spanish Guinea.
Kenya Site aha nke Ugwu Kenya, ya onwe ya si kikuyu Kere-Nyaga ("Ugwu Ucha").
British East Afrika (aha colonial): dika onodu ogugu ya na aha nke ndi ochichi, Great Britain.
Lesotho Dị ka aha nke Sothonke pụtara "nwa" ma ọ bụ "nwa akpụkpọ anụ".
Libya Site na aha ebo ochie Berber akpọ Ndị Libyans site na ndị Gris na Rbw site n'aka ndị Ijipt. Ruo mgbe nnwere onwe nke mba ahụ, okwu ahụ bụ "Libya" na-ejikarị eme ihe nanị n'ọzara kachasị n'etiti ala dị larịị tripolitaniennes na ala dị larịị Fezzan n'ebe ọdịda anyanwụ, na ndagwurugwu nke Nil ke Egypt ke edem usiahautịn. Tripoli ịbụ aha a họọrọ maka isi obodo ahụ, na aha nke ugwu ugwu ugwu, Cyrenaica ebe ọ bụ na ọ bụ oge ochie, "Libya" ghọrọ aha bara uru maka mba ahụ, n'agbanyeghị eziokwu bụ na ọtụtụ n'ime ọzara Ọzara Libia bụ n'ezie n'ókèala ndị Ijipt.
Madagascar Site aha agwaetiti ahụ Malagasy, Madagasikara, n'onwe ya si na Proto-Malay "Njedebe nke Ụwa", nke na-ezo aka n'ebe dị anya iji gaa n'àgwàetiti ahụ site n'ala mbụ nke akụkụ nke ndị bi na ya:N'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia.
Malawi Ikekwe nke dabeere na okwu Aborigine nke pụtara "ọkụ na-ere ọkụ" ma ọ bụ "ire ọkụ", ikekwe sitere na ngosipụta nke anyanwụ na Lake Malawi. President Hastings Banda (onye nchoputa obodo a), kwuru na nyochaa na na 1940 afọ ọ hụrụ "Maravi Lake" na "Bororo mba" na map French nke a kpọrọ "Lower Guinea tinyere Alaeze nke Loango, Congo, Angola na Benguela. Ọ họọrọ aha "Malawi" kama "Nyassa" (ma ọ bụ "Maravi"). "Lake Maravi" adịghị adaba na Lake Malawi. Banda nwere mmetụta dị ukwuu n'oge nnwere onwe na 1964 na a ga-anabata aha ya na Nyasaland na "Malawi".
Nyasaland (aha colonial): Nyasa pụtara "ọdọ" na asụsụ nke mpaghara ahụ. E tinyela aha ahụ Lake Malawi (nke a na-akpọ "Nyassa Lake" ma ọ bụ "Niassa").
Mali Site na mpaghara West African nke otu aha (obodo ukwu nke oge a dị n'ókèala nke alaeze a furu efu). Okwu Mali pụtara " Hippo »en Malinke et Bamana.
Mauritania Site na Latin nke pụtara "ala nke Moors ". Akpọrọ aha (site na ndudue) dị ka Mauretania akụkọ ebe ugwu nke Morocco, aha ya n'otu ebo mauri ma ọ bụ Moorish.
Niger Dị ka aha nke Osimiri Naịja, site na okwu aboriginal Ni Gir ("Osimiri Uhie"), ma ọ bụ Tuareg ime eghirren ("Mmiri na-asọ asọ")44. Ọtụtụ mgbe, a na-aghọtahiekarị (karịsịa site na Latịn) dịka sitere na Latin Niger ("Black"), nke na-ezo aka na agba akpụkpọ ahụ nke ndị bi na ya.
Nigeria Dị ka aha nke Osimiri Naịja. Lee Niger n'elu.
Rwanda Site na aha ndị Abanyarwanda. Rwanda pụtara "nnukwu", "na-eto n'ihu", "n'enweghị ókèala", "ụwa dum"
Senegal Site aha nke Osimiri Senegal, nsụgharị Portuguese nke aha ebo ahụ Berber zenaga (na Arabic Senhaja), nke na-achịkwa ọtụtụ mpaghara n'ógbè ugwu nke Senegal nke oge a (nke dị ugbu a Mauritania) .SENEGAL = SUNU GAL nke pụtara ugbo anyị na asụsụ Wolof
Sierra Leone E si na Sierra Leona, nsụgharị Spanish nke Portuguese Serra Leoa ("Ugwu ugwu"). Onye na-enyocha Portuguese Pedro de Sintra aha obodo a dika odidi ugwu ndi o huru na 1462 ka ha na-aga n'osimiri odida anyanwu Afrika. Anyị amaghị ihe mere ugwu ji mee ka ọ chee ọdụm ha nwere ike dị ka ezé ọdụm, ma ọ bụ ọdụm ndị na-ehi ụra, ma ọ bụ égbè eluigwe nke na-eti mkpu n'ebe ahụ yiri yigharị ọdụm.
Somalia Site na aha nke Somalis, ndị bi n'ebe ahụ. Enyiology nke aha ha anọgideghị na-ejighị n'aka, ma e nwere ụzọ abụọ: na ọ na-erite na ya akpa akpa ("Ndị na-azụ anụ"), ma ọ bụ onye nna ochie na-akọ akụkọ Samaale.
Sudan Site na Arabic Bilad dị ka Sudan (البلاد السودان), "Land of the Blacks". Ebu ụzọ zoro aka na ọtụtụ n'ime Sahel.
Tanzania A ngwakọta nke aha nke abụọ ochie na-ekwu, nke mejupụtara mba a: na Tanganyika na Zanzibar.Tanganyika na - ewepu aha ya site na ọdọ mmiri ahụ. sir Richard Burton bụ Europe mbụ na-ahụ ọdọ mmiri a, na-akọwa na aha ahụ na - enweta site n'asụsụ Aborigine: gị mba ("Jikọọ", n'echiche nke "ebe mmiri na-ezute"). Na 1871 Henry Morton Stanley ekwu na okwu ahụ si South ("Island") na hika ("Efere"). Echiche abụọ ejighị n'aka .Zanzibar, dị ugbu a, na - enweta aha ya site na Zengi ma ọ bụ Zengj (زنكي), ndị obodo ebe aha ya pụtara "nwa". Mgbọrọgwụ a dị na Arabic barr (Ala), nke pụtara "ala mmiri", "ikuku".
Chad A kpọrọ aha mgbe Lake Chad, n'ebe ndịda-n'ebe ọdịda anyanwụ nke mba ahụ. Osimiri ahụ na-ewepụ aha ya site n'okwu ahụ Bomu Tsade ("Ọdọ")
Togo Site n'obodo Togo, taa Togoville. Site na asụsụ nwa : na ("Mmiri") na go ("Coast").
Togo Français, Togoland (aha colonial). na Western Togo bụ aha nke mbụ British colony na ihe taa bụ akụkụ nke Ghana.
Site na aha osimiri ahụ Zambezi, nke na-aga n'ebe ọwụwa anyanwụ nke mba ahụ ma na-eme ka ókèala ya na Zimbabwe.
Northern Rhodesia (aha colonial): dị ka aha ezinụlọ nke Cecil Rhodespraịm minista na onye ọchụnta ego South African nke nyeere aka ịchọta ógbè ahụ. Ihe e kwuru banyere "North" dị iche na ya Southern Rhodesia (taa Zimbabwe).
Mgbanwe nke shonaDzimba-dze-Mabwe, nke pụtara "ụlọ ụlọ" (dzimba ịbụ ọtụtụ n'ime imba, "Ụlọ", na Mabwe ịbụ ọtụtụ n'ime bwe, "Nkume"), n'ile ya anya na mgbidi nke ala eze ahia nke oge ochie Great Zimbabwe.
Southern Rhodesia, Rhodesia (aha colonial): dị ka aha ezinụlọ nke Cecil Rhodespraịm minista na onye ọchụnta ego South African nke nyeere aka ịchọta ógbè ahụ. Ihe e dere na "South" dị iche na ya Northern Rhodesia (taa Zambia).
Dictionary banyere mmalite nke aha na nicknames nke mba Afrika
15,00€ dị na ngwaahịa
1 ọhụrụ site na 15,00 €
Ejiri 1 € 43,10 mee ihe
dị ka Mee 24, 2020 11:46
Ụbọchị mwepụta 2014-09-11T00:00:01Z
Publication Ụbọchị 2014-09-11T00:00:01Z